Ingabe kulula ukuthola ama-backlink aphezulu e-PR ngo-2016?
Wake wazibuza ukuthi yiliphi inani le-backlink elingabangela umkhankaso wokukhangisa kuwebhusayithi yakho? Ngegama elithi "inani :," Angisho ukuxhuma ijusi ofika kwisayithi lakho ngokusebenzisa izixhumanisi zangaphandle. Ngikhuluma ngokubuyela ekutshaleni kwezimali ngendlela yebhizinisi lakho le-intanethi engenayo imali engenayo. Kukhona amawebhusayithi amaningi athengisa izixhumanisi futhi, kamuva, uma kunesidingo esikhulu, kukhona abaningi balabo abangathanda ukukhokha ijusi lokuxhumanisa. Ake sixoxe ukuthi le misebenzi ingathinta kanjani imizamo yethu yokusebenza injini yokusesha. Okokuqala masihlolisise isixhumanisi sokuthenga nokuthengisa imboni.
Xhumanisa ukuthenga nokuthengisa
Uma nje i-Google isamukele ama-backlink njengendlela yokubeka isimo, ama-backlink azoba nesidingo esikhulu phakathi kwabanikazi bewebhu kanye namasayithi wewebhu.
Isixhumanisi sokuthenga isibopho senzeke phakathi nawo-2000, sishintsha yonke imboni kuze kube phakade. Ngaleso sikhathi yonke imboni yayikhulile ekuzithengiseni emuva. Imithombo eminye yewebhu inikeze ama-backlink ngesisekelo sokuqasha. Amanani entengo eyodwa ye-Renault iqalile kusuka ku-$ 30 ngenyanga. Lezi zixhumanisi zikhonjelwe njengezixhumanisi zecala.
Ngemva kwesikhashana, i-Google, kanye nezinye izinjini zokusesha eziphawulekayo, zaqala ukupholisa amasayithi ayethengisa esidlangalaleni izixhumanisi ngokusebenzisa ama-broker amasayithi noma amaforamu. Lezi zigwebo zenze ukulahlekelwa kwi-website rankings noma de-indexation.
Nokho, ngisho nalezi zijeziso eziphezulu ze-Google azizange ziyeke ukubuyisela emuva ukuthengisa imboni. Labo ukuthi ukuthenga nokuthengisa emuva kwe-backlink bathole izindlela ezintsha zokwenza kube nzima ngezinjini zokusesha ukuthola imisebenzi yabo.
Ngokwemihlahlandlela ye-Google, ukuthenga noma ukuthengisa ama-backlink adlula i-PageRank ayamukela njengokwephulwa kwemithetho eqinile. Uma utholakale ekuthengeni izixhumanisi ukuze uthuthukise ukufakwa kwesayithi, isayithi lakho cishe lizothola izinhlawulo kusuka ku-Google. Yingakho, uma wenza lezi zinto, udinga ukuqaphela izingozi.
Ukuthenga nokuthengisa emuva kwe-backlink ngo-2016
Ukuthunyelwa kwezivakashi ezikhokhelwayo
Ukuthola amawebhusayithi anika amandla ukuthumela okuqukethwe okukhokhelwe emakhasini abo, udinga nje ukufaka umbuzo "wokuthenga umvakashi" ebhokisini lokusesha le-Google. Ezinye zalezi zinsizakalo zizokunikeza isevisi yangempela yokwakha isixhumanisi futhi ukhokhe ngokufanele. Kodwa-ke, kunezinhlobo eziningi zamawebhusayithi aphakathi kwezinga eliphansi. Kukhona ezinye iziphakamiso zokubhalwa kwezivakashi eziphezulu zekhwalithi ephezulu ngokubuyisela emuva kwe-backlink. Kulesi simo, amaqembu avuma ukusebenzisana mahhala.
Ukuthenga izixhumanisi kusuka kubalimi
Eziningi ze-backlink ngo-2016 zenziwe ngokuthengwa kwangasese kwezixhumanisi kusuka kubhulogi. Lezi zixhumanisi zihlala zingabonakali yizinjini zokusesha futhi azivami ukudala izinkinga. Ababhulogi abaningi bazi ukubaluleka kwangempela kwama-backlink futhi badinga ukukhokha kwesixhumanisi ngasinye ababekayo. Ngaphezu kwalokho, kufanelekile ukuphawula ukuthi abanye abathandi be-Blogger abathandayo bavuma ukubeka isihloko esinesixhumanisi kuphela kwezinsuku ezimbili noma ezimbili. Amaphesenti amakhulu kakhulu amabhulogi athengisa ama-backlink afakwa ezimakethe ezimakethe ezilandelayo - imfashini, ingcebo, ukuhamba, ezezimali, imfundo, ezemidlalo. Izindleko ezijwayelekile zokuthenga ama-backlink aphezulu e-PR ngo-2016 kwakungu-$ 300 emithonjeni yewebhu yekhwalithi ephakathi, futhi ngaphezu kuka-$ 3000 kwizizinda eziphezulu ezidumile Source .